Horudhac: Norwich City vs Liverpool… (Virgil van Dijk oo soo laabtay, xiddig laf dhabar u ah Reds oo seegaya ciyaartan & Xaqiiqooyinka kulankan) – Gool FM
Horudhac: Norwich City vs Liverpool… (Virgil van Dijk oo soo laabtay, xiddig laf dhabar u ah Reds oo seegaya ciyaartan & Xaqiiqooyinka kulankan)
Ahmed Nur August 14, 2021
(Norwich) 14 Agoosto 2021. Kooxaha Norwich City iyo Liverpool ayaa markii labaad iska hor imaanaya toddobaadka ugu horreeya Premier League muddo saddex xilli ciyaareed ah, iyadoo sanadkii 2019 Reds 4-1 ku edbisay dhiggeeda maalinta koowaad ee horyaalka.
Warka u wanaagsan taageerayaasha Liverpool ayaa ah inay dib u helayaan difaacooda weyn ee Virgil van Dijk kaasoo garoommada kaga maqnaa dhaawac kasoo gaaray jilibka bilawga xilli ciyaareedkii hore.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 07:30 Habeennimo xilliga Geeska Afrika.
Norwich City ayaa soo dhoweyneysa ciyaartoy dhowr ah oo safan kara kulankoodii ugu horreeyay ee kooxda, waxaana ku jira xiddiga reer Scotland ee Billy Gilmour kaasoo amaah kaga tagay xagaagan naadiga Chelsea.
Balse waxaa ciyaartan seegaya Przemyslaw Placheta oo wali kasoo kabanaya Korona Fayras iyo Andrew Omobamidele oo ka xanuunsanaya quummanka.
Dhinaca kale, Liverpool ayaa dib u heleysa Van Dijk kaasoo sheegay inuu taam u yahay ciyaartan kaddib markii uu kasoo kabtay dhaawac kasoo gaaray jilibka bishii October ee sanadkiin hore.
Se taas baddelkeed, waxaa Reds ka maqnaan doona Andrew Robertson oo dhaawac anqowga kasoo gaaray iyo Curtis Jones oo xanuun madaxa ah ku seegaya kulankan, iyadoo ay intaas u dheer tahay in shaki yar la gelinayo xiddigaha khadka dhexe ka ciyaara ee Jordan Henderson iyo Thiago Alcantara.
Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah 14-kii ciyaarood ee ugu dambeeyay Premier League oo ay is arkaan Norwich City , 12 guul ayay gaartay labana barbarro ayay galeen.
Reds ayaa toddobo jeer kusoo adkaatay garoonka Carrow Road ciyaaraha Premier League.
Norwich City ayaa kaliya hal guul gaartay sagaalka ciyaarood ee ay toddobaadka ugu horreeya Premier League dheeshay, waxaana halkaas jeer ay garaacday Arsenal sanadkii 1992 ciyaar ku dhammaatay 4-2 oo ka dhacday garoonkii Highbury oo ay ku ciyaari jirtay Gunners.
Norwich ayaa la garaacay 10 kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League iyadoo noqotay kooxdii saddexaad ee la kulantay guuldarrooyinka ugu badan ee xiriir ah, waxaana ka horreeya Aston Villa oo 11 jeer la garaacay sanadkii 2011 iyo Sunderland oo 20 ciyaarood si xiriir ah looga adkaaday intii u dhexeysay 2003 illaa 2005.
Waxay sidoo kale kooxda The Canaries guuldarro la kulantay shan ciyaarood oo xiriir ah oo ay ku ciyaartay garoonkeeda horyaalka Premier League iyadoo aanan dhalin wax gool ah, waana rikoor ay horraan sameysay Sheffield Wednesday sanadkii 1920 isla markaasna ay barbarreysay Birmingham City sanadkii 1922.
Liverpool ayaa kaliya hal jeer la garaacay kulanka ugu horreeya horyaalka Premier League 11-kii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay iyadoo guuleysatay toddobo kulan halka saddexna ay barbarro ku furatay.
Waa xilli ciyaareedkii saddexaad oo ay Reds ciyaarta ugu horreysa la ciyaareyso koox ku cusub horyaalka, iyadoo 4-1 ku garaacday Norwich 2019-kii, Leeds United-na ku garaacday 4-3 sanadkii hore ee 2020.
Mohamed Salah ayaa noqon kara ciyaaryahankii ugu horreeyay ee shan xilli ciyaareed oo xiriir ah gool dhaliyan kulanka ugu horreeya horyaalka Premier League isagoo saddexley ugu shubay Leeds kal ciyaareedkii hore.
Horudhac: Chelsea vs Crystal Palace... (Romelu Lukaku oo seegaya, sababta uu ku maqnaanayo & Dhibaatooyinka isu biirsaday Palace ciyaarta London Derby)
Horudhac: Deportivo Alaves vs Real Madrid... (Xiddigo muhiim ah oo ka maqnaan doona Los Blancos, rikoorka Madrid ay ka heysato dhiggeeda & Safka uu isticmaali karo Ancelotti furitaanka La Liga)